Shamwari Shamwari uye Hama Vachafambisa Kufamba Kudzoserwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Shamwari Shamwari uye Hama Vachafambisa Kufamba Kudzoserwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Shamwari neshamwari dzinoshanya dzichaita basa rakakosha mukudzoka kwekufamba pamwe nemamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemaviri ekubva kune dzimwe nyika anotarisirwa kutorwa nechinangwa ichi muna 242.
Shamwari dzekushanyira uye hama (VFR) yekufamba vanozoona kukura kwakakwira.
VFR yaive yechipiri inowanzo torwa zororo muna 2019.
242 mamirioni eVFR epasi rese anotarisirwa kutorwa na2025.
Nzvimbo dzekufambisa dzinogona kuburitsa mavisa akakosha kana zvinodiwa izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti mhuri dzibatane zvakare
Kufamba kwemaindasitiri ehunyanzvi anofungidzira kuti kushanyira shamwari nehama (VFR) kufamba kuchaona kukura kwakanyanya, iine 17% mukomboni wegore rekukura (CAGR) pakati pa2021-25, zvichienzaniswa nekuzorora, ichikura pa16.4% kuwedzera pakati penguva imwe chete. nguva.
Kunyange VFR isingapfuure huwandu hwenzvimbo dzekuzorora dzekunze, ichaita basa rakakosha mukudzoka kwekufamba pamwe nemamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemaviri ekubva kune dzimwe nyika anotarisirwa kutorwa nechinangwa ichi na242.
VFR yaive yechipiri yakanyanya kutorwa zororo mu2019 nevanhu vakapindura pasi rose (46%) muQ3 2019 ongororo yevatengi. Yaive yechipiri chete kune 'zuva nemahombekombe kupukunyuka' (58%).
Kunyangwe hazvo gore rekurambidzwa kwekufamba uye yakawanda nguva kumba zvinogona kureva kuti chishuwo cheyakajairwa zuva, gungwa uye jecha zororo richava rakasimba, kushanyira mhuri neshamwari kungangove kwakanyanya kukoshesa kune vanhu vazhinji izvozvi.
Mune mamwe misika sosi iri zvakare chikonzero chakakurumbira chekufamba, ne53% yevafambi mu USA kuisa pamberi parudzi urwu rwendo, uchiteverwa ne Ositireriya (52%), Kanadha (49%), India (64%) uye Saudhi Arabhiya (60%).
Imwe ongororo ichangoburwa yakaratidza kuti 83% yevakabvunzwa pasi rese vaive 'zvakanyanya', 'chaizvo' kana 'zvishoma' vane hanya nezvezvirambidzo pakushamwaridzana neshamwari uye nemhuri. Mapuratifomu akadai seZoom, Facebook neWhatsApp zvakapa vatengi mukana wekusangana, asi izvi hazvisi zvakafanana nekumbundira nhengo yemhuri kana kunyatsogara pasi pamwe chete.
Munguva yedenda iri, masangano ekufambisa uye ezvekushanya pasirese akadaidzira kuti chikamu ichi 'chibatanidzane' mukumukazve. Chinangwa chese ari maviri ekuenda uye emabhizinesi ekushanya izvozvi zvinofanirwa kunge zviri zvekubatanidza mhuri mushure megore rinopfuura rekurambidzwa kwekufamba kwenyika.
Kwokuenda kunogona kuburitsa mavisa akasarudzika kana zvinodiwa izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti mhuri dzibatane zvakare. Ndege dzinogona kuona dzakakurumbira nzira dzeVFR ndedzimwe dzekutanga kudzoreredzwa, mabhizinesi ekugamuchira vaeni uye vanokwezva vanopa vanogona kukurudzira uye kudzikisira mhuri. Maindasitiri ese mudunhu rekufamba anogona kuve neruzivo rwakanakisa kuti ave nekunzwisisa kukuru kwemusika wekushanya uyu.